ILizwi eliSiseko • Mayelana Nathi - Abapapashi bokuCinga nokuTshabalalisa
I-Word Foundation, Inc. yintlangano engenzi nzuzo echazwe kwimeko yaseNew York ngoMeyi 22, 1950. Le yintlangano yodwa ekhoyo eyasungulwa kwaye igunyazisiweyo nguMnu Percival kule njongo. Isiseko asihambelani okanye sinxulumene nayiphi na enye inhlangano, kwaye ayivumeli okanye ixhase naluphi na umntu, isikhokelo, umcebisi, utitshala okanye iqela elibiza ukuba liphefumulelwe, liqeshwe okanye livunywe ngenye indlela ukuchaza nokutolika imibhalo kaPercival.
Ngokwezigwebo zethu, isiseko sinokuba nenani elingenamkhawulo lamalungu akhethe ukunika inkxaso kunye nokuzuza kwiinkonzo zalo. Kule miqolo, iTrasti eneetalente ezizodwa kunye neendawo zobuchule zikhethiweyo, ngubani okhetha iBhodi yabaLawuli abajongene nolawulo jikelele kunye nokulawulwa kwemicimbi ye-corporation. I Trasti kunye nabaLawuli bahlala kwiindawo ezahlukeneyo e-United States nakwamanye amazwe. Sidibanisa ndawonye kwintlanganiso yonyaka kunye noonxibelelwano oluqhubekayo kulo nyaka ukwenzela ukufeza injongo yethu eyabelwana ngayo-ukwenza iincwadi zePercival zifumaneke ngokukhawuleza kwaye kuncedise abafundi abathintana nathi kwiindawo ezininzi zehlabathi ukujongana nezifundo zabo kunye nomngeni onzima abantu abaninzi ngomnqweno wabo wokuqonda lobu bukho bomhlaba. Kule nqwelo yeNyaniso, UkuCinga nokuPhelela ayinakunqunyulwa ngokwemida, ubunzulu kunye nembuyekezo.
Kwaye ke, ukuzinikezela kwethu nolawulo lwethu kukuzisa abantu behlabathi okubhaliweyo kunye nenjongo yaloo ncwadi UkuCinga nokuPhelela kunye nezinye iincwadi ezibhalwa nguHarold W. Percival. Ukususela kwi-1950, i-Word Foundation yashicilele kwaye ihambisa iincwadi zePercival kwaye zancedisa abafundi ekuqondeni kwabo imibhalo kaPercival. Ukufikelela kwethu kunika iincwadi kwiintolongo kunye namathala eencwadi. Siphinde sinike iincwadi eziphuculweyo xa ziya kubelwa nabanye. Ngethuba loMfundi kwiProgram yabafundi, sinceda ukulungiselela indlela yamalungu ethu angathanda ukufunda i-Percival works together.
Amavolontiya ayabalulekile kwimibutho yethu njengoko asinceda ukwandisa imibhalo ye-Percival kwi-reader ebanzi. Sinelungelo lokufumana uncedo lwabahlobo abaninzi kwiminyaka. Iminikelo yabo iquka ukunikela iincwadi kwiilayibrari, ukuthumela iincwadana zethu kubahlobo, ukulungelelanisa amaqela ezifundo ezizimeleyo kunye nemisebenzi efanayo. Sifumana negalelo lemali ebalulekileyo ekusizeni ukuba siqhubeke nomsebenzi wethu. Siyamkela kwaye sinombulelo kakhulu ngale ncedo!
Njengoko siqhubela phambili iinzame zethu zokwabelana ngokukhanya koLuntu lwePercival ebuntwini, simema ngokukhawuleza abafundi bethu abatsha ukuba bajoyine.
"Umyalezo Wethu" wawungumhleli wokuqala owabhalwa nguHarold W. Percival kwiphepha lakhe eliziwayo ngenyanga, Ilizwi. Wadala ingcaciso emfutshane yomhleli njengoluhlu lokuqala lo magazini. Okungentla iukuphindaphinda kwalo mfutshane ngu qulelo umqulu wokuqala wamashumi amabini anesihlanu eboshwe, 1904 - 1917. Umhleli unokufundwa ngokubanzi kwi yethu Ikhasi loHlelo.